वेबसाइट डिजाइन बेलवे वाशिंगटन
कसरी isenselogic.com तपाइँको वेबसाइट बनाउँछ
तपाईंको व्यवसायको लागि एक वेबसाइट निर्माण गर्नका लागि ग्राउन्ड अप शुरू हुन आवश्यक छ कुन सर्टकटहरू मानिसहरूले तपाईंको सेवाहरू फेला पार्न प्रयोग गरिरहेका छन्। यदि तपाइँको वेबसाइट खोजी ईन्जिनका लागि अनुकूलित छैन भने सम्भावित नयाँ ग्राहकहरु तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु मा जाँदैछन्।
चरण १: डिस्कवरी मार्केट व्यवसाय विश्लेषण
तपाईको विश्लेषण गर्नुहोस् वेबसाइट। हामी मेटा सेट / कुञ्जी शब्दहरू, देखिने टेक्स्ट र कोडमा हेर्छौं कि तपाईको वेबसाइट कसरी प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूको लागि स्थित छ भनेर हेर्नका लागि। उदाहरण को लागी, तपाइँको सामग्री कूटशब्दको साथ कसरी मिलाइएको छ कि ग्राहकहरु खोजी गर्दैछन्?
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। हामी तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरू जाँच गर्छौं जुन खोज ईन्जिन प्लेसमेन्टको लागि उत्तम प्रभावकारी रणनीति निर्धारण गर्न शीर्ष positions स्थानमा श्रेणीकरण गरिरहेका छन्।
सबैभन्दा प्रभावकारी कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्नुहोस्। हामी लक्षित कुञ्जी शब्दहरूको प्राथमिकता सूची विकसित गर्छौं जुन ग्राहकले खोजी गरिरहेका छन्। तपाईको व्यवसाय वा वेबपेज फेला पार्न तपाई एक खोज ईन्जिनमा के टाइप गर्नुहुन्छ? हामी त्यसपछि त्यो कीवर्ड लिन्छौं र गुगल खोजशब्द योजनाकार प्रयोग गरेर हामी फेला पार्न सक्छौं लुकेका कुञ्जी शब्दहरू तपाईंले सोच्नु भएको छैन होला। विशेष कुञ्जी शब्द खोज्ने उपभोक्ताहरूको सहि संख्या पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई व्यवसाय आय बढाउनको लागि लक्षित गर्न हामी कुञ्जी योजनाकार पनि प्रयोग गर्छौं।
चरण २: खोजशब्द विकास र अनुसन्धान
कीवर्ड विश्लेषण: कुञ्जी शब्दहरूको सूचीबाट हामी कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरूको लक्षित सूची पहिचान गर्छौं। अन्य उद्योग र श्रोतहरूका शब्दहरूको समीक्षा। खोजशब्दहरूको पहिलो सूची प्रयोग गर्नुहोस् र खोज इञ्जिन क्वेरीहरूको संख्या निर्धारण गर्नुहोस्। हामी त्यसपछि बहुवचनहरू, एकभाषाहरू र वाक्यांशहरूद्वारा कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्दछौं।
उद्देश्यहरू र लक्ष्यहरू। हामी तपाईंको उद्देश्यहरू अग्रिम रूपमा परिभाषित गर्दछौं ताकि हामी तपाईंले शुरू गरेको कुनै पनि अन्य विज्ञापन कार्यक्रमबाट लगानीमा तपाईंको फिर्ताको मापन गर्न सक्दछौं। उदाहरण को लागी, तपाइँको लक्ष्य को लागी व्यापार यातायात मा एक 30 प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ। वा तपाईं आफ्नो वर्तमान रूपान्तरण दर २ प्रतिशतबाट percent प्रतिशतमा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ।
चरण:: सामग्री सब्मिशन र अप्टिमाइजेसन
पृष्ठ शीर्षक सिर्जना गर्नुहोस्। कुञ्जीशब्द आधारित शीर्षक तपाइँको पृष्ठ विषयवस्तु र तपाइँको कुञ्जीशब्दहरूको प्रवाह स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। मेटा ट्यागहरू सिर्जना गर्नुहोस्। मेटा ट्याग वर्णन र मद्दत क्लिक-थ्रु प्रभाव गर्दछ तर सिधा रैंकिंगको लागि प्रयोग गरिदैन। पृष्ठहरूमा रणनीतिक खोज चरणहरू राख्नुहोस्। चयन गरिएको कुञ्जी शव्दहरू तपाईंको वेबसाइट स्रोत कोड र निर्दिष्ट पृष्ठहरूमा अवस्थित सामग्रीमा एकीकृत गर्नुहोस्। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हामी प्रत्येक सामग्री पृष्ठमा एक देखि तीन कुञ्जी शब्दहरूको सल्लाह दिशानिर्देश लागू गर्दछौं र सूची पूरा गर्न थप पृष्ठहरू थप्दछौं। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरू तपाईंको कुञ्जी शव्दहरूको एक प्राकृतिक समावेशको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले खोज इञ्जिनहरूलाई द्रुत निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ जुन पृष्ठको बारेमा के हो। एक प्राकृतिक दृष्टिकोण सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ। धेरै परीक्षणले देखाउँदछ कि to०० देखि २००० शब्दहरू सहितको पृष्ठले छोटो भन्दा बढि प्रदर्शन गर्दछ। अन्तमा, प्रयोगकर्ताहरू, बजार, सामग्री लिंक लोकप्रियता र र the्कि ranking नम्बरहरू निर्धारण गर्दछ।
चरण:: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट मोबाइल मैत्री छ
गुगलका अनुसार खोजहरू डेस्कटप उपकरणहरू भन्दा मोबाइल उपकरणहरूमा गरिन्छ। यसको जवाफमा गुगलले आफ्नो खोज एल्गोरिदमलाई मोबाइल अनुकूलको साइटहरूको पक्षमा परिवर्तन गरेको छ। यदि तपाईंको हालको वेबसाइट मोबाइल अनुकूल छैन भने तपाईं ग्राहकहरू गुमाउँदै हुनुहुन्छ।
चरण:: लगातार परीक्षण र मापन
परीक्षण र मापन: व्यक्तिगत कुञ्जी प्रदर्शन प्रदर्शनको मूल्या including्कन सहित, तपाईंले लागू गर्नुभएको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता निर्धारण गर्न खोजी ईन्जिन रैंकिंग र वेब ट्राफिकको विश्लेषण गर्नुहोस्। परिवर्तनहरूको नतीजा जाँच गर्नुहोस्, र परिवर्तनहरू एक्सेल स्प्रेडशिटमा ट्र्याक गर्नुहोस्, वा जे पनि तपाईं सहज हुनुहुन्छ।
मर्मत कुञ्जीशब्दहरू र वेबसाइट सामग्रीको निरन्तर थप र परिमार्जन खोज ईन्जिन रैंकिंगमा लगातार सुधार गर्न आवश्यक छ ताकि वृद्धि दरारत नहोस् वा उपेक्षाबाट खस्कदैन। तपाईं आफ्नो लिंक रणनीति समीक्षा गर्न र तपाईंको इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड लिंकहरू तपाईंको व्यवसायसँग प्रासंगिक छन् भनेर पक्का गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा ब्लगले तपाईलाई आवश्यक संरचना र सामग्री थप गर्न सजिलो बनाउन प्रदान गर्दछ। तपाइँको होस्टिंग कम्पनी सामान्यतया तपाईंलाई ब्लगको सेटअप / स्थापनाको साथ मद्दत गर्न सक्दछ।